Indlela ukushintsha ideskithophu isithombe sakho: Imiyalelo
Uma uthi nhlá, umbuzo kanjani ukushintsha ideskithophu isithombe sakho, ilula ukuba okweqisayo. Kodwa ungakhohlwa mayelana nabantu okokuqala empilweni yami yahlala computer futhi akunandaba indlela endala zingabantu - ezinhlanu noma amahlanu. Namuhla sizozama uwasothe lonke ulwazi kwi siqu kwikhompyutha ushintsho ideskithophu ingemuva ikakhulukazi kulabo wasiphakamisa igundane okokuqala.
Into yokuqala okumele uyenze ngaphambi kokuba umsebenzisi imfundamakhwela indlela yokusebenzisa leli bhukwana bese uzama ukushintsha isithombe ideskithophu - ukukhomba inguqulo yakho ye yesistimu yokusebenza. Indlela ukushintsha sangemuva ku -desktop yakho nganoma iyiphi wabo okufanayo, kodwa imisebenzi ehlukene kungenziwa ngokuthi, ithebhu elawula imenyu.
Uma ungazi nguqulo ye-Windows efakwe kukhompyutha yakho, yini okufanele uyenze okulandelayo.
Sithola esikrinini isithonjana "Computer yami" futhi chofoza kukho inkinobho yegundane kwesokudla.
Siya "Properties" imenyu.
Sinesithakazelo iyiphi ithebhu encane "System".
Sithola indlela abukeka ngayo inguqulo yesistimu yokusebenza.
Uma kungekho isithonjana ideskithophu "Computer yami", futhi emnyango "Qala" imenyu isithombe livela phambi kwakho, njengoba kuboniswe ngenhla, khona-ke esebenzisa i-Windows 8.
amakhompyutha zanamuhla Iningi, okuyinto ungakwazi ukuthenga ezitolo, abe-operating system ezifakwe. Kumakhompyutha ithengwe kusukela abasabalalisi ogunyaziwe izofakwa-Windows 8 noma ezimweni ezingavamile, i-Windows 7. Yiqiniso, inguqulo yakamuva isakhula "Eight" sasibhekwa njengophawu lokuthi akuphumelelanga ngisho "Microsoft", kodwa ziqhubeka zanda, ngaphansi kwebhaxa ukuthi kunguquko esilandelayo sizobe khulula . Ngakho, indlela ukushintsha isithombe se-Windows 8 ne-Windows 7 ideskithophu?
Lezi nhlelo zokusebenza ngezindlela eziningi esifana nomunye kodwa kuhluke kakhulu kakhulu. Uma usebenzisa "eziyisishiyagalombili", ngemva isibuko sokuqalisa nge "tile" udinga ukuya ideskithophu uqobo. Ngemva kwalokho, bonke isenzo kokubili izinhlelo ziyafana.
Ukushintsha ideskithophu isithombe sakho, chofoza inkinobho yegundane kwesokudla kunoma iyiphi isikhala mahhala kwesikrini sakho.
Ngo Ngaphambi Kokuphrinta kwimenyu evuleka, thola bese uchofoza "Yenza kube ngokwakho". Lapha kufanele ubone ifasitela wokwengamela property kudeskithophu.
Kwesokudla ezansi thola endinyaneni "Ubuso bekhompyutha Ingemuva". Chofoza.
Ku-window, kudingeka ukhethe ifolda lapho amanga isithombe kudingeka. Lezi kungaba ekhona ohlelweni ngesikhathi izithombe ukufakwa nezithombe, kanye eyakho.
Cindezela ukubuyekeza futhi ucacise indlela kufolda lapho unesithakazelo izithombe zethu. Vula.
Njengoba ubona, zonke izithombe manje uboniswa imenyu control. Wena nje kufanele uphawu ebhokisini phambi kwabangcwele ufuna ukubona kudeskithophu yakho, futhi ucacise isikhathi phezu lapho siyoshintshwa.
Yilokho wazi kanjani ukushintsha isithombe ideskithophu akunzima kangako.
Asikho isidingo kufanele ukuba ungungqondongqondo ukuqonda ukuthi ukuthuthukiswa akuyona esikhundleni ubuchwepheshe. Ezinye izinhlelo zokusebenzisa esikhundleni abanye, kodwa lokhu akusho ukuthi inguqulo yangaphambilini ziyolibaleka. Uma uthenge i-computer ubudala ngezandla, it is hhayi ngaphandle ukuthi kubuyekezwe futhi wakuthola omunye izinhlelo amadala. Akukho okungalungile ngalokho. Ziyakwazi esitebeleni kuwusizo kakhudlwana entsha okuningi futhi. Ngiyishintsha kanjani isithombe ku-Windows XP noma Vista ideskithophu?
Eqinisweni, indlela nse njengoba kwaba njalo endabeni odlule. Udinga chofoza inkinobho yegundane kwesokudla kudeskithophu, kodwa manje sinesithakazelo kwesikwenzayo sub-isigaba "Properties ideskithophu", noma nje "Properties."
Siphendukela ithebhu "Ideskithophu".
Lapha ungakwazi ukukhetha omunye izithombe ezihlongozwayo ukuthi abangu pre-efakwe kusistimu. Noma ngokuchofoza inkinobho "Dlulisa amehlo", ungakhetha eyodwa ufuna kusuka eqoqweni lakho.
Kukhona nezinye izindlela, kanjani ukushintsha ideskithophu isithombe sakho. Ngokwesibonelo, amagajethi ekhethekile (Uhlelo) ngokuthi "bekhompuyutha iphepha" futhi "SwapWall". Bahlanganisa zonke izici ukuphathwa desktop ungabona kwi -operating system Windows 7. Nokho, inzuzo yabo eyinhloko ukuthi bona ingafakwa ngaphambili wokusebenza ukuthi awunayo i-othomathikhi isithombe ushintsho.
Sithemba ukuthi ngemva kokufunda lesi sihloko, uzoba ayisekho indaba yokuthi udinga ukushintsha isithombe Ezamakhompiyutha ideskithophu. Akukona njengoba kunzima njengoba kungase kubonakale efika kuqala, umsebenzisi ongenalwazi.
Kanjani ukwakha iseva isitambu? Amaseva Ready isitambu (isitambu)
Imininingwane ubuchwepheshe emsebenzini professional inkampani Human Resources
Ngingasitholaphi injini sayithi? Yini injini isayithi kangcono
Kuyini BIOS Phoenix futhi indlela yokubuyekeza
Yiziphi imithetho ubhala igama ifayela kumele waphawula: amaphuzu ayinhloko
Imiyalelo kanjani ukusabalalisa i-intanethi ephathekayo WiFi
Kuyasiza ukuthi ubisi bembuzi izinsana
Lyrmix: Kuyini lokhu hlelo? Yiziphi izingozi zayo?
Abangasebenzi Ezingokwemvelo Kanye Nezenzo buyisiphi
Self-ukufakwa: iwindi epulasitiki indlu yamapulangwe
Umdlavuza futhi Aries uthando ukuhambisana